Sales & Drive Archives - Page2of2- Glory Assumption Space
Sales Driver - (7) Posts Male
အသက် (၁၈-၂၅) အတွင်းဖြစ်ရမည်။ အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး(၁)နှစ်ရှိရမည်။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သက်တမ်းအနည်းဆုံး(၁)နစ်ရှိရမည်။
Sales Drive - Male ( 10 post )
အသက် ၃၅ နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ ယာဉ်မောင်း အတွေ့အကြုံ ရှိရမည်။ အရောင်းကားမောင်းဖူးသူ ဦးစားပေးမည်။ အခြေခံပညာ အထက်တန်းတက်ရောက်ဖူးသူ ဖြစ်ရမည်။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရှိရမည်။
<<<<<<<<<<<<<<< “ URGENT POSITION ”>>>>>>>>>>>>>>>>> Yangon မြို့ ရှိ သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ် အနီးတစ်ဝိုက်တွင်ရှိသော GAS Agent နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ကုမ္မဏီ ကြီးများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ဝန်ထမ်းများ အမြန် အလိုရှိနေပါသည်။ 1.	Sales & Drive / Male ( 10 ) Posts / Salary – 150000 ~ 180000 Kyats -	ဘွဲ့တစ်ခုခုရပြီးသူ ( သို့ ) အနည်းဆုံး ( ၁၀ ) တန်းအောင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ -	ကားကြီး၊ ကားသေးများကို ကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနှင်နိုင်ရမည်။ -	အနည်းဆုံးလုပ်သက် ( ၂ ) နှစ်ရှိရမည်။ -	ကား Spare Parts များနှင့် ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ -	ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာပြီးစိတ်ရှည်မှု့ ရှိရမည်။ -	သွက်လက်ဖြတ်လက်ပြီးအလုပ်ကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ -	အရက်၊ ကွမ်း၊ ဆေးလိပ် ကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ Email ဖြင့်၎င်း၊ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com , gasrecruit.hr1@gmail.com Phone No.- 09 262223783, 09 970539386,09 262555438, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales & Drive (Male) (10)Posts
Location in : Magway
Yangon မြို့တွင်းရှိ စမ်းချောင်းမြို့နယ် နှင့်တခြား မြိုကြီးများတွင်အနီးတွင်ရှိသော GAS Agent နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော Company ကြီးများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ဝန်ထမ်းများ အမြန် အလိုရှိနေပါသည်။ GAS က အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု တွေ နဲ့ မြန်မြန်သာလျှောက်ထားလိုက်ပါ 2.Sales & Drive(Distribution Representative ) (for Yangon/ Mandalay/Pathein/Magway) M (10) Posts - Experience: 3+ years of experience in sales driving and distribution. - Red & Brown category driving license. Email ဖြင့်၎င်း၊ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com Phone No.- 09 262223784, 09 977125251,09 262555438, 09 263121101 ရုံးလိပ်စာကတော့ တိုက်အမှတ်(၆) ၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၄)၊ အင်ကြင်းမြိုင်အိမ်ရာ ၊ ဗိုလ်ချို(၁)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့။